तपाईको आजको दिन कस्तो छ ? हेर्नुहोस् असार १० गते शुक्रबारको राशिफल - Mitho Khabar
June 23, 2022 mithokhabarLeaveaComment on तपाईको आजको दिन कस्तो छ ? हेर्नुहोस् असार १० गते शुक्रबारको राशिफल
आज श्री शाके १९४४ बि.स.२०७९ असार १० गते शुक्रबार इश्वी सन २०२२ जुन २४ तारीख आषाढ कृष्ण पक्ष एकादशी तिथी अश्विनी नक्षत्र अतिगण्ड योग वव करण चन्द्रमा मेष राशिमा आनन्दादि योगमा वज्र योग नल नाम संवत्सर सुर्य उत्तरायण ग्रीष्म ऋतु योगिनी एकादशीव्रत (ज्यो.प.सरोज घिमिरे)
कन्या राशि (टो, प, पि, पु, ष, ण, ठ, पे, पो) खान पानको क्षेत्रमा सजग रहनु उत्तम रहनेछ । सामान्य चो ट पटकको सम्भाबना रहेता पनि मित्रजनहरुको साथ सहयोग द्वारा ब्यत्तित्व बिकासमा सहयोग मिल्नेछ । कुल कुटुम्बहरुको साथ सहयोगमा आम्दानि क्षेत्रमा बृद्यि हुनेछ । सामान्य चोटपटकको सामना गर्नु पर्न सक्छ सजग रहनु होला ।
मीन राशि (दि, दु, थ, झ, ञ, दे, दो, च, चि) सामान्य चो टपटकको सिकार भईन सक्छ सजग रहनु होला । मान्यजन संगको सम्बन्ध खराब रहन सक्छ । बिद्या प्राप्ति योग रहेको छ । सन्तान सम्बन्धि समस्याले सताउने छ । गैर ब्यक्तीको पूर्ण विस्वास नगर्नुनै राम्रो रहनेछ । मनोरञ्जन मुलक सरसामानको क्षेत्रमा सामान्य खर्च हुन सक्नेछ ।
सेवाग्राहीसँग दुर्व्यवहार गर्ने लहान अस्पतालका कर्मचारी निलम्बित
अमेरिकाको मियामी एयरपोर्टमा विमानमा आगो लाग्यो (भिडियो)
साहसी पराक्रमी सैनिक जवान मछिन्द्र,जस्ले बचाए करेन्ट लागेर जल्दै गरेको ब्यक्तिलाई
र्‍यापर बालेन शाहले काठमाडौंको मेयरमा आफूले ९० हजार मतले जित्ने दाबी गरेपछि विजय लामाले दिए यस्तो सुझाव
April 25, 2022 mithokhabar
खुसिको खबर : आज एकैदिन यति धेरैले कोरोना जितेर घर फर्के